Kule minyaka embalwa edlule ziye zaba njalo okuningi ezifo zabantwana bakwa obelusanda kuzalwa abasha kakhulu kubuhlungu ebukeka futhi ekhuthazayo kokungabaza ezijulile isifo esibizwa ngokuthi i-hemangioma. Kuyini, ukwazi ukuthi akubona bonke abazali, futhi ukubonakaliswa sangaphandle wakhe bethukile eziningi bacindezeleka kakhulu. Ake sizame ukuqonda ukuthi yini ngalokhu kugula.
Imininingwane kawonkewonke futhi imbangela
"Isimila" - a term ukushayela endaweni stupor abantu abaningi. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi izimila kukhona okubulalayo nokuhlala kungavamile ukuba ingozi. Hemangiomas kukhona nje yakamuva. Babonakala ngenxa ukuguqulwa izitsha. Futhi ukuhlukumeza yentuthuko yabo senzeka ingane ngaphambi kokuzalwa, esiswini sikamama. ukukhuluma Cishe, izitsha aqale ukwanda ngokweqile futhi kwakhiwa hemangioma. Kuyini futhi lokho kuqala izinguquko semithambo namanje bazi ngempela yini. Kukhona kuphela ezizathwini unproven eqagela ezingeni. On the esengozini ngokuqiniseka sekuyaphela njengoba isizathu okuthiwa izifo ezibangelwa amagciwane (Ari phakathi kwabo), idlulisele umama esizayo ngesikhathi sokukhulelwa iimveke ezisithandathu. Ngisho phakathi engcupheni, kukhona imithi ethile, kodwa ngalokho - izibalo azanele. imvelo Abampofu phakathi izimbangela umdlavuza njalo ezishiwo phambili - esimweni hemangiomas abakakhohlwa wakhe. Futhi ekugcineni, kukhona ukushintsha kwama-hormone (like umama nengane yakhe). Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi zonke lezi imicabango kungukuthi lawo. Kanye umbono ocacile: hemangioma - lokho oyikho: "Isijeziso sesiphambeko kwaphezulu" wezono abazali noma abanye ukugula ezivamile, njengokudla umkhuhlane, labo ababebanga ukuba ukhathazeke futhi into ubaluleke kakhulu kangakanani.
Ingabe ngidinga ukususa?
induduzo enkulu Kungenzeka ukuthi ukuthuthukiswa engaphelele semithambo ezimweni eziningi amuke ezingeqi kwezingu iminyaka eyishumi. Isexwayiso uphawu kungaba ukunwetshwa ngokuzumayo imfundo, okungukufa hemangioma. Lokho kuyinto - into yesikhashana noma isignali isidingo ukusebenza - kuphela udokotela kungacacisa. Zonke eduze ukubukela izindawo amabi abomvu kudingeka lapho engxenyeni okhakhayini. Ilungiselelo elinjalo angase abhekane neqiniso lokuthi uJesu Ithumba (ngisho ingozi) uzoqala ukuba kuhlume ngokusebenzisa amathambo Yekhanda. Khona-ke ingane esongela hemangioma ubuchopho, futhi lokhu kakhulu, ngacabangisisa.
Kwezinye izimo, uma isimila sikhula kancane kancane futhi akusho engena ijule izicubu, kungaba kubhekwe okuthile we ukukhubazeka encane yezimonyo - amavukuzi noma warts. Ukususwa akudingekile. Nakuba, uma hemangioma itholakala gqamile khundla, nasengqondweni, ingane izoba nobunzima. Futhi lapho ucabanga ukuthi lesi sifo ezingemnandi avame ekhetha endaweni ikhanda (endaweni yesibili - imbilapho ingxenye yomzimba, okuyilona elisebenzayo futhi ezingemnandi, kodwa ukuphila omdala), kunoma yisiphi isimo ekugcineni kuyodingeka anqume ukuthi uyisuse noma ukubhekana nesimo sengqondo uhlobo umphakathi ngabantu zinokukhubazeka libizwa.
Ungakhohlwa ukuthi hemangioma - kungcono umonakalo hhayi kuphela psyche, kodwa futhi nempilo jikelele. lesion Umhlinzi, kuncike kulokho ncamashi zingabantu ingxenye yomzimba, futhi kungaholela ubuthulu, kanye somoya, futhi ubumpumputhe, ukwakheka amahlule, okuyinto luhambisana nomthwalo Imiphumela ngeshwa kakhulu.
Ngenxa yokwethuka akudingekile, ngisho noma hemangioma ezinganeni. Izithombe okusesihlokweni esithi, akungabazeki, akuyona okukhuthazayo, kodwa umkhuba libonisa ukuthi ukuphila ngokuvamile enomusa kunalokhu okulindelekile kuye.
Izimpethu White kuso. Pinworms ezinganeni: Izimpawu kanye Ukwelashwa